Slidesgo, fitaovana ho an'ny matihanina | Famoronana an-tserasera
Slidesgo, fitaovana ho an'ny matihanina
Amin'ny tenako voalohany amin'ny famoronana an-tserasera noteneniko Canva, fampiharana famolavolana tena ilaina, fitaovana ho an'ny matihanina roa amin'ny tontolon'ny famolavolana fa tsy, natao hamoronana flyers anao manokana, logo, fampisehoana, sns.
Androany aho te hiresaka momba ny iray fitaovana famolavolana vaovao, Slidesgo, Tetikasa vaovao avy amin'ny orinasa Freepik ity. Tsy haiko raha fantatrao ny Freepik, niara-niasa taminy nandritra ny fotoana fohy aho, fitaovana tena ilaina io izay horesahiko ihany koa avy eo.
Alohan'ny hiresahana Slidesgo Niara-niasa tamin'io aho, namorona fampisehoana, nosedraina ary nanitsy azy mba hahafahako milaza aminao ny hevitro sy ny fomba fiasa miaraka aminy ary tokony hiteny aho hoe, tiako izany, hitako fa mahasoa sy tsotra izany ary heveriko fa mety hahasoa anao koa izy io.
Amin'ity tranga ity Slidesgo manolotra anay maodely fampisehoana maimaim-poana ho an'ny PowerPoint sy Google Slides. Tsy mampiasa PowerPoint aho, fa niasa tamin'ny alàlan'ny Google Slides mba hahafahako manitsy azy ireo, ary tena tsotra izany. Inona koa azonao atao ny manondrana azy ireo amin'ny PDF na manonta azy ireo mivantana.
Heveriko ho fampiharana tena ilaina izany mifantoka amin'ny matihanina amin'ny sehatra samihafa, toy ny fanabeazana, varotra, orinasa ary fitsaboana, fa izy ireo koa dia manao modely ho an'ny portfolio na manohy, ary ny hafa izay azo ampiasaina amin'ny karazana lohahevitra.
Eo am-pamakiako dia manandrana mikarakara ny antsipiriany rehetra mety ilain'ny matihanina izy ireo, ka mandray izany hatrany fironana farany amin'ny famolavolana sary. Ahitana loharanom-pahalalana marobe (sary, sary, sary masina, infografika, sary ...) ary namboarina ho ao an-tsain'ny mpampiasa izy ireo, noho izany mora ny manitsy azy ireo mba hahafahana manamboatra azy haingana.
Vao haingana aza izy ireo dia namoaka fizarana Sekoly misy fampianarana momba ny fomba fanovana ny môdely ao amin'ny Google Slides sy PowerPoint mba hahamora kokoa azy io.
Manasa anao hampiasa azy aho ary milaza amiko ny hevitrao, mieritreritra aho fa fitaovana tsara afaka hanamora sy hanampy anay any am-piasana izany. Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Slidesgo, fitaovana ho an'ny matihanina
Mamorona gradien-loko avy amin'ny fakantsaranao finday miaraka amin'ny fanavaozana Adobe Capture vaovao